San Htun's Diary: သာစွ ရခိုင်မြေ - ၁
Hi San Htun,
I'm your regular reader of your blog and I love to read your blog.
After I read your blog today's article,I really enjoyed your article,
because all are truth and correct.Now I found out your fb and sentafriend request.If you accept my request, in future we can meet on fb.
Kyi Kyi Than
ကုိုယ်တုို့ တုိုင်းပြည်စုတ်ပြတ်သွားတာ ဒီလိုလူတွေအုပ်ချုပ်နေလို့ ပေါ့။
တချို့ ဖဘက ကွန်မန့် တွေက ရုိုင်းရုိုင်းစိုင်းစိုင်းမပြောပဲ နှိပ်ကွပ်သွားတာမျိုးတွေ ကိုယ်ဖြင့်စာအုပ်တောင်ထုတ်
အေးလာပြီ။ ကျန်းမာရေးပို ဂရုစိုက်နော် စန်းထွန်းလေး။
wow! love so read.